सिंहदरबारमा निमित्त ‘नायक’ हरुको गर्जन! « AayoMail
सिंहदरबारमा निमित्त ‘नायक’ हरुको गर्जन!
भक्तपुर–भक्तपुर अस्पतालले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
भारतमा कोभिसिल्डको दुवै डोजको अन्तर १६ हप्ता बनाइयो
काठमाडौं–भारतीय चिकित्सकहरुले कोरोनाविरुद्धको खोप कोभिसिल्डको पहिलो र दोस्रो डोजबीचको अन्तर
प्रज्ञाप्रतिष्ठानको डबलीमा शनिबार बृहत् नागरिक आन्दोलनले आयोजना गरेको ‘नागरिकको प्रश्न, दलहरुको जवाफ’ कार्यक्रममा दलका नेताहरुको निरिहता प्रदर्शन भयो।
प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि नागरिक अभियन्ताहरुले सुर गरेको प्रतिगमनविरुद्धको खबरदारीकै सिलसिलामा आयोजित कार्यक्रमको प्रमुख ध्येय अलमलिएको राजनीतिको निकासबारे प्रमुख दलका नेताबाट स्पष्ट जानकारी आउँछ भन्ने थियो।
सचेत नागरिकको ठूलो भेलाबीच उपस्थित एमाले, माओवादी, नेपाली कांग्रेस र जसपाका जिम्मेवार नेताहरुले राजनीतिक निकासबारे आश्वस्त पार्न सकेनन्।
उनीहरुले मुलुकको राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने कुनै योजना, रणनीति नभएको परिचय दिए। र, साथसाथ मुलुकको राजनीतिमा नयाँ तर निर्देशित समीकरणको संभावना पनि औँल्याए।
एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध ‘प्लान टु’ किन आएन भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर दिन सकेनन्। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाट आफू निषेधित भएको विरह पोख्दै उनी पन्छिए। उनले आफ्नो राजनीतिक जीवनका सामुन्ने आएको चुनौती सामना गर्न आफू तयार रहेको जानकारी गराए।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले, ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न लागि परेको बताए पनि उनको जवाफबाट राजनीतिक निकास सुनिश्चित देखिन्न।
ओलीविरुद्ध अश्विासको प्रस्ताव ल्याउने दबाब झेलिरहेको स्पष्टीकरण दिँदै प्रचण्डले मुलुकको राजनीतिमा चौतर्फि चासोहरु रहेको र वाह्य हस्तक्षेपको संभावना औल्याए।
डबलीमा केही दिनयता दिनहुँ जसो बालुवाटारमा सत्ता वार्ता गर्दे आएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर जोसँग ओलीको सत्ता जोगाउने सबै भन्दा सहज विकल्प छ उनी पनि स्पष्ट हुन चाहेनन्। ओलीबाट मधेसका मागहरुको सम्बोधन हुनसक्ने संकेत गरे। कांग्रेसका वाकपटु नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले कांग्रेसले ओलीलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताए।
डबली खासमा राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिने उद्देश्यका साथ आयोजित थियो। नागरिक अगुवाहरुले नेताहरुका नाडी छामे, उपस्थित नागरिकले नेताहरुको ल्याकत आंकलन गर्न पाए। एउटा राजनीतिक औपचारिकता निर्वाह भयो।
फागुन ११ गते सर्वोच्चको फैसलाबाट संसद पुनर्स्थापना भएको र सर्वोच्चकै फागुन २३ को अर्को फैसलाबाट नेकपा विभाजन भएर एमाले र माओवादीमा रुपान्तरण भएपछिको राजनीतिक अन्योल कायम भएपनि परिस्थिति बदलिँदै गएको देखिन्छ। आउँदो साताभित्रमा केही निकास संभवत निस्कन्छ।
सर्वोच्चका दुई फरक–फरक फैसलापछिको राजनीतिक परिणाम सम्हाल्न दलका नेतालाई सकस भएकोमात्र हो। सकसलाई खुकुलो बनाउन सहयोगी जुटेको अवस्था देखिँदैछ। त्यसैपनि अन्योलको अवस्था लामो समयसम्म रहीरहनु भनेको मुलुकको राजनीतिमा खुलेर वाह्य हस्तक्षेप बढ्नु हो। त्यस्तै वातावरण बनिरहेको छ। मुलुकको राजनीतिमा उत्तरभन्दा दक्षिण बढी प्रभावकारी हुने अवस्था सृजना भएको संकेत देखिँदैछ।
नियोजित वा आकस्मिक जे सुकै भएपनि केपी ओलीको राजनीतिक पल्ला यतिबेला गह्रौ भएको छ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री, अदालतको आदेशबाट संसद पुनस्र्थापित हुँदासमेत पदमा आसिन छन्। यो उनको राजनीति होइन, लाचारी हो। अहिले उनी निर्देशित नायकको परिचय कमाउने उद्यममा सक्रिय भइरहेका छन्। पार्टी फूटाएर अर्काको पोल्टामा जाने ओलीको कदमले कम्यूनिष्ट आन्दोलन र एमालेले कति मूल्य चुकाउनुपर्ने हो, त्यसको लेखाजोखा कमरेडहरुले गर्दै गर्लान।
ओली पूर्वीनेपाल झापाका हुन्। झापाको सामाजिक, राजनीतिक जीवनमा ओलीलगायत ‘कुमाई’ ब्राह्मणहरुको भूमिका सदावहार चर्चामा रहन्छ। ‘कुमाईको घुमाई’ भन्ने गरिन्छ, झापामा। यही कारण देश अन्योलमा फसिरहेको त होइन?
यहाँ कुमाई जातीय नश्लप्रति कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह राखिएको होइन। झापाको सामाजिक राजनीतिक जीवनमा प्रचलित भनाई र मान्यता कतै राष्ट्रिय राजनीति, कुटनीति र फैसलाहरुमा प्रतिबिम्बित त भएको होइन?, एउटा जिज्ञासा पेशमात्र गरेको हो, यसलाई अन्य गलत अर्थमा नलिन अनुरोध गर्दछु।
ओलीसँग पार्टी विभाजन प्राप्त प्रतिनिधिसभाको गणित सबैभन्दा भरपर्दो आडभरोसा हो, अहिलेका लागि। त्यसैले हुनसक्छ उनी डगमगाएका छैनन्। ढिलो–चाँडो राजनीतिले नयाँ बाटो लिन्छ नै।
खासमा तीनवटा महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय हुने देखिन्छ केही दिन भित्रमा। एउटा, ओलीले विश्वासको मत लिने वातावरण बनाउने। दोस्रो, नयाँ समीकरण बन्ने र तेस्रो, एमाले औपचारिक रुपमा विभाजना नहुने तर, पार्टीमा गुटहरुको विकास हुने।
नेताहरुको व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बन्ने छ, एमालेको सामुन्ने। सत्ता प्राप्तीले पार्टीमा परेको गहिरो क्षति पुर्न सक्छ वा सक्तैन, सयमक्रममा देखिने नै छ।
२७५ को प्रतिनिधिसभामा अहिले २७२ को मात्र गणना हुन्छ। कांग्रेसका दुई र एमालेका एकजनाको निधन भएको छ। जसपाका दुईजना निलम्बनमा छन्। प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२० सांसद छन्, कांग्रेसका ६१, माओवादीका ५४, जसपाका ३२, राप्रपाका एक, नेमकिपाका एक र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदको गणित नै अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको प्रमुख कारक हो।
विश्वासको मत लिन १३८ सिट आवश्यक हुन्छ। राजनीति सोझो अंकगणित होइन, त्यो ज्यामिति जस्तो सूत्र र समीकरणमा चलेको हुन्छ भनिन्छ। त्यसैले ओलीको साथमा आफ्नो पार्टीका १२० मा माओवादीका केही थप छँदैछन्।
हालै बसेको एमालेका माधव नेपाल खेमाको केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले पार्टीलाई विभाजनमा जान नदिने, पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष जारी राख्ने नीति लिएको छ। एमालेभित्र पार्टी ह्विप क्रस गर्ने हिम्मत सायद कसैबाट नहोला। तर, कांग्रेस भने जोडबलका साथ एमाले विभाजनको पक्षमा सक्रिय छ। बाँकी रहे, जसपा र माओवादी। जसपा आफैंमा भिन्न–भिन्न प्रकृती, प्रवृत्ति र चरित्रका दल र पात्रहरुको एक खाले क्लब हो। राजनीतिक दृष्टीकोण र सिद्धान्तमा एकमत भएकाहरु भएको भए पार्टी भन्न मिल्दथ्यो। जसपा मोर्चामा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवजस्ता उत्तरपन्थी र महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायतका दक्षिणपन्थी। राजनीतिक दर्शनका हिसावले उत्तर र दक्षिण पन्थीको संज्ञा दिने गरिएको छ।
तर, प्रकारान्तले जसपाको राजनीतिक नेतृत्वमा दक्षिणको बलियो प्रभाव र पकड रहेको मानिन्छ। जसपा सिंगो पार्टी ओलीको पक्षमा उभिनसक्ने बलियो आधार मधेशका मुद्दाहरुको सम्बोधन हो। संघीयता, नागरिकता, आफ्ना सांसदहरुको निलम्बन फुकुवाजस्ता प्रमुख मुद्दामा ओली सकारात्मक भएको अवस्थामा जसपा ओली सरकारमा जानसक्छ। पुरै पार्टी जान नसक्ने अवस्थामा जसपामा विभाजन निश्चित छ। जसपा सत्तामा जानुपर्ने मधेसका मागका साथसाथ अब बन्ने सरकार चुनावी सरकार पनि हो। मधेसको सामाजिक, राजनीतिक जीवनमा सरकारमा रहेर चुनावमा जानुले ठूलो अर्थ राख्छन् सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक सबै दुष्टीकोणबाट। यसबाहेक प्रदेश २ को प्रदेश सरकारको सुरक्षाका लागि पनि ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ जसपाका सामुन्ने।
कांग्रेस खासमा किनाराको साक्षीको रुपमा रहनेछ, आसन्न सत्तासमीकरणमा। माओवादी घायल भएर प्रतिपक्षमा उभिने छ। एमालेमा केही वरिष्ठ नेताहरु सिमान्तकृत हुनेछन्।
राजनीतिले निकास त पाउँछ। नेपालको राजनीतिक गतिरोध लम्बिदै जाँदा राजनीति बाहिरबाट निकास निकाल्ने प्रयोग हामीले गरिसकेका छौं। दलहरु आपसमा सहमत नहुँदा सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई सिंहदरबार सुम्पने पनि यिनै नेता हुन्।
जसपाले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता चुनेको छैन। नयाँ समीकरणबीच जसपाको संसदीय दलको नेतामा महन्थ चुनिने छन्। उनी पनि प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य हुनेछन्।
तर पनि, संभवत ओली नै प्रधानमन्त्रीको आसनमा विश्वासको मतसहित आसिन हुनेछन्। संवैधानिकता, संसदीय पद्धति, परम्परा र राजनीतिक दृष्टीमा पदमा बसिरहन अयोग्य नेताको हातमा फेरिपनि मुलुकको बागडोर हुनेछ। मुलुकले दुई तीहाईको विकल्पमा बहुमतको सरकार प्राप्त गर्नेछ।
नेकपा उत्तरबाट प्रभावित भएको आरोप आइरहेकै थिए। अब परिस्थिति बदलिने देखिँदैंछ। आस्तिकहरु, धर्मभिरुहरु आफू निमित्तमात्र भएको विश्वास गर्दछन्। राजनीति अब दक्षिणी कोणबाट पोषित, पल्लवित र पुष्पित हुने देखिँदैछ। निमित्त नायकहरु सिंहदरबारबाट गर्जिरहने छन्।
राष्ट्रवादी चुनावी नाराहरुको रंग, रुप बदलिने छ। पुष्पकमलहरुले अमेरिकन कार्यक्रम एमसिसिलाई राष्ट्रवादी नारा बनाउने छ। हामी राष्ट्रवादी गीत गाउँदै आएका थियौं, गाइनै रहने छौं। तर, प्रकारान्तले हामी पराधिनता निम्त्याइरहेका छौं। पशुपतिनाथले मुलुकको कल्याण गरुन्! शुभम्!
अझै ठूलो कबिला-बुद्धि जमातबाट राजनेता, आधुनिक जंगबहादुर, राष्ट्रवादका ठेकेदार र अंग्रेजीका धुरन्धर विद्वान ठानिने ओलीले नै जानाजान दोस्रो लहरको भंगालोमा
सरकार, मलाई एक सिलिन्डर अक्सिजन दे!
बुधबार दिउँसो भैरहवाको मेडिकल कलेजबाट एकजना चिकित्सकले फोनमा आफ्नो निरिह अवस्था सुनाउनुभयो– ‘आइसियुमा गम्भीर बिरामीहरू अक्सिजनकै भरमा बाँचेका छन्। कोभिड
दुई तिहाइको दुर्दशा : राजनीतिमा खतराको बादल
अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? ओलीले ओगट्दै आएको सत्तामा अब को पुग्ने हुन्? वा मुलुक अर्को राजनीतिक अभ्यास उन्मुख हुने
बेला न कुबेला भोट ‘नेउला’
ओली चुनाव गराउन चाहन्छन्, आफ्नै हातले। चुनावै भनेर सत्ता लम्ब्याउनेवाला छन्। उनी त अम्बाको पात खाएर कोरोनाबाट बाँच्छन होला, तर